Jurgen Klopp Oo Tixgelinaya Inuu Iibiyo Salah, Mane Ama Firmino Si Uu... - Wararka Maanta
Home/Warka Ciyaaraha/Jurgen Klopp oo tixgelinaya inuu iibiyo Salah, Mane ama Firmino si uu…
Jurgen Klopp oo tixgelinaya inuu iibiyo Salah, Mane ama Firmino si uu…
Jurgen Klopp ayaa laga yaabaa inuu diyaar u noqdo inuu kala diro seddexda weeraryahan ee caanka ah ee Liverpool si uu lacag ugu uruuriyo u dhaqaaqista Erling Braut Haaland .
Xiddiga weerarka uga ciyaara kooxda Borussia Dortmund ayaa sii wada dadaalkiisa kooxda Westfalenstadion, waxana 20 jirkan lala xiriirinayaa koox kasta oo ugu waa weyn yurub kadib markii uu dhaliyay 31 gool 30 kulan oo uu ciyaaray xilli ciyaareedkan ilaa haatan.
Inkastoo ciyaaryahanka reer Norwey lagu heli lahaa £ 68m 2022 sababo la xiriira qandaraaskiisa, qandaraas adag oo ku saabsan adeegiisa ayaa dhici kara xagaagan, tababaraha Liverpool Klopp ayaa lagu soo waramayaa inuu diyaar u yahay inuu aado xidigan si uu kooxda Liverpool ugu soo biiro.
Sida laga soo xigtay Mundo Deportivo , mid ka mid ah Mohamed Salah , Roberto Firmino ama Sadio Mane ayaa laga yaabaa inay albaabka u baxaan haddii kooxda heysata Premier League ay si dhab ah uga fiirsato inay la soo wareegto Haaland xagaagaan.
Mustaqbalka Salah ee Anfield waa hadal heyn weyn ka dib markii uu diiday inuu meesha ka saaro inuu u dhaqaaqayo Barcelona ama Real Madrid , halka ciyaaryahanka ay isku kooxda yihiin Mane sidoo kale lala xiriirinayo inuu u dhaqaaqayo kooxo kale.
Haaland ayaa sidoo kale la fahamsan yahay inay diirada u saaran tahay kooxaha Manchester United , Manchester City iyo Chelsea , iyadoo warbixin dhawaan soo baxday ay sheegeyso in Blues ay isku dayi karto inay la gasho heshiis is dhaafsi ah oo ku lug leh Timo Werner .
ama Firmino iibiyo inuu Jurgen Klopp Mane Salah tixgelinaya